आयरल्याण्डसँग नेपाल १३ रनले पराजित | Ratopati
आयरल्याण्डसँग नेपाल १३ रनले पराजित
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeअसोज २२, २०७६ chat_bubble_outline0
काठमाडौं – ओमानमा जारी पाँच राष्ट्र सम्मिलित टी–२० शृङ्खलाअन्तरगत तेस्रो खेलमा नेपाल आयरल्याण्डसँग १३ रनले पराजित भएको छ ।
आयरल्याण्डले निर्धारित २० ओभरमा ८ विकेटको क्षतिमा १ सय ४५ रन बनाएको थियो । जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको नेपालले निर्धारित २० ओभरमा पुरै विकेट गुमाएर १३२ रन मात्र जोड्न सक्यो । सुरुवाती ब्याट्सम्यानले सन्तुलित ब्याटिङ प्रर्दशन गरे पनि मध्य र तल्लो क्रमका ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंकको स्कोर समेत छुन नसके सकेनन् ।
ओपनरद्वय पारस खड्काले २५ र ईशान पाण्डेले २२ रन बनाएका थिए । आरिफ शेखले २६ रन र दिपेन्द्रसिंह ऐरीले १९ रन जोडे । आयरल्याण्डका लागि पाउल स्टर्लिङले सर्वाधिक ५९ रनको योगदान दिए । उनले यस क्रममा ६ चौका र २ छक्का हिर्काएका थिए । त्यस्तै, एन्डी बालबर्नीले ३८ तथा स्टुवार्ट थम्सनले २१ रनको योगदान दिए ।
नेपालका लागि सन्दीप लामिछाने र पारस खड्का र अभिनास बोहोराले २–२ तथा करण केसी र ललित राजवंशीले १–१ विकेट लिए । यसअघि हङकङ र नेदरल्याण्डबिरुद्धको खेलमा नेपाल विजयी भएको थियो ।तर आजको खेलामा नेपाल पराजित भएपछिद आयरल्याण्ड तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ ।
उसले चार खेलबाट ६ अंक जोडेको छ भने नेपाल २ खेलबाट ४ अंक सहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा यथावत छ ।
#नेपाल#आयरल्याण्ड# टी–२० शृङ्खला
राष्ट्रपतिले ‘महाभियोग’ नै निम्त्याइरहेको हो ?
नेकपाभित्रको अन्तरद्वन्द्वलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं- कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा
आइतबार कहाँ कति थपिए कोरोना संक्रमित ? (तथ्यांकसहित)
सत्ता सहकार्यमा ओलीले मागे देउवाको सहयोग, काँग्रेस बैठकमा देउवाको ब्रिफिङ
ओलीलाई हटाउनु पार्टी एकताको म्यान्डेट विपरित हुन्छ- रायमाझी
काँग्रेसलाई गृहसहित अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव
गण्डकीमा ५ संक्रमित थपिए, कुल संक्रमित संख्या
कोरोना असरः एयर फ्रान्सले ७ हजार ५०० कामदार हटाउने
कोरोना अपडेटः विश्वभर ६० लाख मानिस निको भए
अफगान सुरक्षाफौजको कारबाहीमा ७ तालिबानीको मृत्यु
बाल्टिमोरमा कोलम्बसको स्मारक तोडफोड
अष्ट्रेलियाका अर्थमन्त्रीद्वारा राजनीतिबाट अलग हुने घोषणा
सिरहामा ८१ वर्षीया वृद्धाले जितिन् कोरोना
ढलबाट कोभिड– १९ को सङ्क्रमण फेला परेको प्रमाण छैन : स्वास्थ्य मन्त्रालय